Qoraal – Akhbaarta Wanaagsan
Cadeeymaha / Qoraal
… in uu Ilaah Surgaad bani-aadam qatay oo uu nin noqoday. Dadyowga dunida ku nooli badankooda waxay si weyn u beeniyaan in uu Ciise Masiix uu qaatay surad bani-adam ah iyaga …
Kitaabka Quduuska Ah / Qoraal / Tukashooyin
1 TESALONIIKA 5:14-24
14Oo waannu idin waaninaynaa, walaalayaalow, Kuwa si aan hagaagsanayn u socda la taliya, oo kuwa qalbi jabay dhiirigeliya, oo kuwa itaalka yar garab siiya, oo dadka oo dhanna u dulqaata. …
Kitaabka Quduuska Ah / Qoraal
Falimaha Rasuullada cutubka 2aad
Hadiyadda Ah Ruuxa Quduuska Ah 1 Oo kolkii maalintii Bentekoste la gaadhay, meel bay kulligood wada joogeen. 2 Oo waxaa filanla’aan samada ka yimid sanqadh sida dabayl xoog leh oo …
All resources / Kitaabka Quduuska Ah / Maqal / Qoraal
Falimaha Rasuullada 1:6-11
Falimaha Rasuullada 1:6-11 Sidaas daraaddeed markay isu yimaadeen, ayay weyddiiyeen isaga oo waxay ku yidhaahdeen, Rabbow, ma haddeer baad boqortooyada u soo celinaysaa Israa’iil? 7 Markaasuu iyaga ku yidhi, Dantiinna …
Matayos 6:5-15 Oo goortaad tukanaysaan, ha ahaanina sida labawejiilayaasha, waayo, waxay jecel yihiin inay tukadaan iyagoo taagan sunagogyada iyo meesha jidadku isku gooyaan si ay dadka ugu muuqdaan. Runtii waxaan …